Ivai varanda vaJehovha (VaRoma 12:​11) | Yokudzidza
“Musava nousimbe pabasa renyu. . . . Shandirai Jehovha.”—VAR. 12:11.
Uranda hunotaurwa pana VaRoma 12:11 hunosanganisirei?
Tingaita sei kuti tisava varanda vaSatani uye venyika yake?
Jehovha anopa varanda vake mibayiro yei?
1. Taura kusiyana kwakaita maonero anoita vakawanda nyaya yokuva muranda nezvinotaurwa pana VaRoma 12:11.
URANDA hwechiKristu hwakasiyana chaizvo nezvinofungwa nevakawanda pavanonzwa shoko rokuti muranda. Pavanongonzwa kuti muranda vanotanga kufunga nezvemunhu anenge achidzvinyirirwa, achiitirwa utsinye uye achibatwa zvisina kunaka. Asi Shoko raMwari rakafemerwa rinotaura nezvouranda hunosanganisira kushandira Tenzi akanaka zvichibva pamwoyo. Muapostora Pauro paakarayira vaKristu vepakutanga kuti “shandirai Jehovha,” akashandisa mashoko anoreva kuti vaifanira kuva varanda vaJehovha. Paakataura mashoko aya, aitovakurudzira kuita basa dzvene zvichibva pakuda kwavaiita Mwari. (VaR. 12:11) Uranda uhwu hunosanganisirei? Tingaitei kuti tisava varanda vaSatani uye venyika yake? Uye munhu anowana mubayiro wei nokuramba achishumira akatendeka somuranda waJehovha?
“NDINODA TENZI WANGU”
2. (a) Chii chaigona kuita kuti muranda wechiIsraeri arambe kusunungurwa? (b) Kuboorwa nzeve kwaiitwa muranda aizvipira kuramba achishandira tenzi wake kwairevei?
2 MuMutemo wakapiwa vaIsraeri naMwari, tinodzidza kuti Jehovha anoda kuti tive varanda vakaita sei. Muranda wechiHebheru aifanira kusunungurwa mugore rechinomwe rouranda hwake. (Eks. 21:2) Zvisinei, kumuranda aida tenzi wake uye aida kuramba ari pabasa rake, Jehovha akaita urongwa hwakanaka chaizvo. Tenzi wacho aifanira kuuya nemuranda wake pedyo nesuo kana kuti gwatidziro, omuboora nzeve nomutsunda. (Eks. 21:5, 6) Kuboorwa kwaaiitwa nzeve kune zvakwaireva. Sezvo nzeve iine chokuita nokuteerera, muranda wacho aifanira kuramba achishandira tenzi wake achimuteerera. Izvi zvinotibatsira kunzwisisa kuti kuzvitsaurira kuna Jehovha kunosanganisira kumuteerera zvichibva pakuda kwatinomuita.
3. Chii chinoita kuti tizvitsaurire kuna Mwari?
3 Patakabhabhatidzwa sevaKristu, takanga tatosarudza kushumira Jehovha, kuti tive varanda vake. Takazvitsaurira nokuti taida kuteerera Jehovha uye kuita kuda kwake. Hapana akatimanikidza. Chokwadi, kunyange vechiduku pavanobhabhatidzwa, vanenge vatozvitsaurira pachavo kuna Jehovha, kwete nokuti vanoda kufadza vabereki. Kuzvitsaurira kwatinoita sevaKristu kunobva pakuti tinoda Tenzi wedu ari kudenga, Jehovha. Muapostora Johani akanyora kuti: “Kuda Mwari kunoreva izvi, kuti tichengete mirayiro yake.”—1 Joh. 5:3.
TAKASUNUNGURWA ASI TIRI VARANDA
4. Tinofanira kuitei kuti tive “varanda vokururama”?
4 Tinoonga chaizvo kuti Jehovha akaita kuti tikwanise kuva varanda vake! Kutenda kwatinoita muchibayiro chorudzikinuro chaKristu kunoita kuti tisunungurwe pajoko rechivi. Kunyange zvazvo tichine chivi, takabvuma kuzviisa pasi paJehovha naJesu. Pauro akatsanangura pfungwa iyi zvakajeka mune imwe tsamba yake yakafemerwa paakati: “Chokwadi zvionei semakafa kuchivi asi muri vapenyu kuna Mwari muna Kristu Jesu.” Akabva anyevera kuti: “Hamuzivi here kuti kana muchiramba muchizvipa kumunhu sevaranda kuti mumuteerere, muri varanda vake nokuti munomuteerera, zvimwe vechivi chinotungamirira kurufu kana kuti vokuteerera kunotungamirira kukururama? Asi Mwari ngaaongwe kuti makanga muri varanda vechivi asi makava vanoteerera zvichibva pamwoyo madzidzisiro iwayo amakaiswa kwaari. Chokwadi, zvamakasunungurwa muchivi, makava varanda vokururama.” (VaR. 6:11, 16-18) Ona kuti Pauro akataura ‘nezvekuteerera zvichibva pamwoyo.’ Chokwadi, kuzvitsaurira kwedu kuna Jehovha kunoita kuti tive “varanda vokururama.”
5. Chii chatiri kurwisana nacho uye nei?
5 Kunyange zvakadaro, pane zvipingamupinyi zvatinofanira kukunda kuti tirambe tichirarama maererano nokuzvitsaurira kwedu. Tiri kurwisana nezvinhu zviviri. Kutanga, tine dambudziko rakafanana nerakasangana naPauro. Akanyora kuti: “Ndinofarira mutemo waMwari maererano nomunhu wandiri nechomukati, asi ndinoona munhengo dzangu mumwe mutemo uchirwisana nomutemo wepfungwa dzangu uye uchinditungamirira ndiri nhapwa kuenda kumutemo wechivi uri munhengo dzangu.” (VaR. 7:22, 23) Isuwo takaberekwa tisina kukwana. Saka tinoramba tichirwisana nezvido zvenyama. Muapostora Petro akatikurudzira kuti: “Ivai sevanhu vakasununguka, asi muchiva norusununguko rwenyu kwete sechinhu chokufukidzisa zvakaipa, asi sevaranda vaMwari.”—1 Pet. 2:16.
6, 7. Satani anoita sei kuti nyika ino iite seyakanaka?
6 Chechipiri chatiri kurwisana nacho inyika ino iri kukanganiswa nemadhimoni. Mutongi wenyika ino Satani anokanda zvombo zvake patiri achida kuti tisaramba takaperera kuna Jehovha naJesu. Anoedza kutiita kuti tive varanda vake nokutiisira miedzo inogona kutikanganisa. (Verenga VaEfeso 6:11, 12.) Imwe nzira inoshandiswa naSatani kuti aite izvozvo ndeyokuita kuti nyika yake iite seyakanaka. Muapostora Johani akanyevera kuti: “Kana munhu achida nyika, kuda Baba hakusi maari; nokuti zvinhu zvose zviri munyika—kuchiva kwenyama nokuchiva kwemaziso nokushamisira nezvinhu zvoupenyu zvomunhu—hazvibvi kuna Baba, asi zvinobva munyika.”—1 Joh. 2:15, 16.
7 Chido chokupfuma chakazara munyika. Satani anoita kuti vanhu vafunge kuti mari ndiyo inoita kuti munhu afare. Zvitoro zvikuru zvinotengesa zvinhu zvakasiyana-siyana isaruraude. Vashambadzi vanokurudzira vanhu kuti vangofunga nezvokuva nezvinhu zvakawanda uye kufunga nezvemafaro chete. Makambani anobatsira vanhu vanoda kuita nzendo dzekuvhakacha anoshambadza nzvimbo dzinoyevedza asi kazhinji kacho unenge uchiendako nevanhu vane mafungiro enyika. Chokwadi, zvose izvi zviri kutikurudzira kuva neupenyu hunonzi nenyika hwakanaka.
8, 9. Ingozi ipi iripo, uye nei tichidaro?
8 Muapostora Petro paaitaura nezvevaya vaiva muungano yechiKristu yepakutanga vakanga vava nemaonero enyika, akanyevera kuti: “Vanoona kurarama kwoumbozha munguva dzemasikati semafaro. Ivo mavara nemakwapa, vachifara zvisingadzorwi nedzidziso dzavo dzinonyengera pavanenge vachidya nemi. Nokuti vanotaura mashoko okuzvikudza asingabatsiri, uye nokuchiva kwenyama nemiitiro yokusazvibata, vanonyengera vaya vanenge vachangopukunyuka pavanhu vanogara vachikanganisa. Ivo vanovavimbisa rusununguko, asi ivo pachavo vari kurarama sevaranda vokuora. Nokuti munhu wose anokundwa nomumwe anoitwa muranda naiyeye.”—2 Pet. 2:13, 18, 19.
9 Kugutsa “kuchiva kwemaziso” hakuiti kuti munhu asununguke. Asi kunotoita kuti munhu ave muranda watenzi wenyika ino asingaoneki, Satani Dhiyabhorosi. (1 Joh. 5:19) Kuva muranda wepfuma kune ngozi chaizvo uye hazvisi nyore kubuda muuranda ihwohwo.
10, 11. Mazuva ano, Satani anonyanya kuda vanaani, uye dzidzo yenyika inoita sei kuti vaomerwe?
10 Sezvaakangoita muEdheni, mazuva anowo Satani anoti nangananga nevasati vava neruzivo. Anonyanya kuda vechiduku. Satani haafariri kuona wechiduku kana kuti chero ani zvake achizvipira kuva muranda waJehovha. Muvengi waMwari anoda kuti munhu wose anotsaurira upenyu hwake kuna Jehovha akundikane kuramba akavimbika uye akazvipira kuna Jehovha.
11 Ngatimbodzokerai kumuenzaniso wemuranda uya anobvuma kuboorwa nzeve yake. Muranda iyeye anofanira kunge aimboti rwadziwei asi ozopora, achisara ava nechiratidzo chokuti muranda. Wechiduku anogonawo kuomerwa kana kutorwadziwa nemhaka yokurarama achiita zvakasiyana nevezera rake. Satani anoita kuti vanhu vafunge kuti kuva nebasa munyika yake kunoita kuti munhu agutsikane, asi vaKristu vanofanira kufunga nezvekukosha kwokugutsa zvinodiwa zvavo zvomudzimu. Jesu akadzidzisa kuti: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mat. 5:3) VaKristu vakazvitsaurira vanoraramira kuita kuda kwaMwari kwete kwaSatani. Vanofarira mutemo waJehovha uye vanoufungisisa masikati nousiku. (Verenga Pisarema 1:1-3.) Zvisinei, dzidzo yakawanda yemazuva ano inoita kuti mushumiri waJehovha ave nenguva shoma yokufungisisa uye kugutsa zvinodiwa zvake zvomudzimu.
12. Mazuva ano vechiduku vakawanda vanofanira kusarudzei?
12 Tenzi aisanamata Jehovha aigona kuita kuti muranda waKristu aomerwe noupenyu. Mutsamba yake kuvaKorinde, Pauro akabvunza kuti: “Wakadanwa uri muranda here?” Akabva avapa zano rokuti: “Ngazvirege kukunetsa; asi kana uchigonawo kuva akasununguka, zviri nani kushandisa mukana wacho.” (1 VaK. 7:21) Munhu aitoda hake kuva akasununguka. Munyika dzakawanda mazuva ano, mutemo unoti mwana anofanira kuenda kuchikoro kusvikira pane rimwe zera. Kana asvika pazera iroro, anogona hake kusarudza zvaanoda. Kuenderera mberi nedzidzo kuti munhu azowana basa munyika ino kungaita kuti zvimuomere kuva nerusununguko rwokuti aite basa renguva yakazara.—Verenga 1 VaKorinde 7:23.
Uchashandira tenzi upi?
DZIDZO YEPAMUSOROSORO INONYANYA KUKOSHA HERE?
13. Idzidzo ipi inonyanya kubatsira vashumiri vaJehovha?
13 Pauro akanyevera vaKristu vokuKorose kuti: “Chenjerai: zvichida pangava nomumwe munhu angaenda nemi semhuka yake yaabata nouzivi uye nounyengeri husina zvahunobatsira maererano netsika yevanhu, maererano nezvinhu zvokutanga zvenyika, kwete maererano naKristu.” (VaK. 2:8) Mazuva ano ‘uzivi uye unyengeri husina zvahunobatsira hunoenderana netsika yevanhu’ hunoonekwa mumafungiro enyika anosimudzirwa nevakawanda vakadzidza. Dzidzo yepamusorosoro inoita kuti vanhu vasimbirire kuwana dzidzo yemumabhuku, asi vachisara vasina unyanzvi hunozovabatsira pane zvavachasangana nazvo muupenyu. Asi vashumiri vaJehovha vanosarudza dzidzo inovabatsira kuti vave neunyanzvi hunozoita kuti varambe vachishumira Mwari vaine upenyu husina twakawanda-wanda. Vanofungisisa zano rakapiwa Timoti naPauro rokuti: “Chokwadi, kuzvipira kuna Mwari uku pamwe chete nokugutsikana inzira inopfumisa kwazvo. Naizvozvo, kana tiine zvokudya nezvokupfeka nepokugara, tichagutsikana nezvinhu izvi.” (1 Tim. 6:6, 8) Pane kuwana madhigirii uye mazita anoratidza kudzidza kwavakaita, vaKristu vechokwadi vanoisa pfungwa dzavo pakuwana “tsamba dzokurumbidza” nokushanda nesimba muushumiri.—Verenga 2 VaKorinde 3:1-3.
14. Sezviri pana VaFiripi 3:8, Pauro aiona sei ropafadzo yake yokuva muranda waMwari naKristu?
14 Funga nezvomuapostora Pauro. Akadzidza pamakumbo aGamarieri, mudzidzisi woMutemo wechiJudha. Dzidzo yaakawana inogona kuenzaniswa neyepayunivhesiti. Asi aiona sei dzidzo iyoyo paaiienzanisa neropafadzo yokuva muranda waMwari naKristu? Akanyora kuti: “Ndinoonawo zvinhu zvose sokurasikirwa kana ndichienzanisa nokukosha kukuru kwokuziva Kristu Jesu Ishe wangu.” Akawedzera kuti: “Ndakabvuma kurasikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake uye ndinozviona semarara mazhinji, kuti ndiwane Kristu.” (VaF. 3:8) Zvakataurwa naPauro zvinobatsira vaKristu vechiduku uye vabereki vavo vanotya Mwari kusarudza nokuchenjera panyaya yedzidzo. (Ona mifananidzo.)
BATSIRWA NEDZIDZO INONYANYA KUKOSHA
15, 16. Sangano raJehovha rinotipa dzidzo yakaita sei, uye chinangwa chayo ndechei?
15 Zvinhu zvakamira sei kumayunivhesiti akawanda ari munyika? Hakusiriko here kunowanzotangira mhirizhonga dzezvematongerwo enyika? (VaEf. 2:2) Izvozvo zvakasiyana nezvinoita sangano raJehovha iro rinopa dzidzo inopfuura dzose muungano yechiKristu ine rugare. Mumwe nomumwe wedu anokwanisa kubatsirwa neChikoro chaMwari Choushumiri vhiki yoga yoga. Kunewo kosi inodzidzisa hama dzisina kuroora dziri mapiyona (Chikoro cheBhaibheri Chehama Dzisina Kuroora) uye inodzidzisa mapiyona akaroorana (Chikoro cheBhaibheri chevaKristu Vakaroorana). Dzidzo yaMwari yakadaro inotibatsira kuti titeerere Tenzi wedu wokudenga, Jehovha.
16 Tinogona kutsvaka pfuma yokunamata muWatch Tower Publications Index kana kuti paWatchtower Library iri paCD-ROM. Chinangwa chedzidzo iyi ndechokuti tinamate Jehovha. Dzidzo iyi inoita kuti tikwanise kubatsira vamwe kuti vayananiswe naMwari. (2 VaK. 5:20) Izvi zvinoita kuti vakwanisewo kudzidzisa vamwe.—2 Tim. 2:2.
17. Kusarudza dzidzo inonyanya kukosha kune mibayiro yei?
17 Mumufananidzo waJesu wematarenda, varanda vaviri vakatendeka vakarumbidzwa uye vakafara pamwe chete natenzi wavo nokupiwa rimwe basa. (Verenga Mateu 25:21, 23.) Mazuva ano, kusarudza dzidzo inonyanya kukosha kunoita kuti munhu afare uye kune mibayiro. Funga zvakaitwa naMichael. Akapasa chaizvo kuchikoro zvokuti vadzidzisi vake vakamushevedza kuti vazokurukura nezvemikana yaaiva nayo yokuenda kuyunivhesiti. Vakashamiswa chaizvo Michael paakasarudza kuita kosi yenguva pfupi yakaita kuti akwanise kuzviriritira ari piyona wenguva dzose. Anonzwa sokuti ane zvaakarasikirwa nazvo here? Anoti, “Dzidzo yaMwari yandakawana sapiyona uye iye zvino ndichishanda somukuru muungano, inokosha chaizvo.” Anotiwo, “Makomborero neropafadzo zvandinazvo zvinokosha chaizvo kupfuura chero mari yandingadai ndakawana. Ndinofara chaizvo kuti handina kusarudza dzidzo yepamusorosoro.”
18. Chii chinoita kuti ude kusarudza dzidzo yaMwari?
18 Dzidzo yaMwari inotibatsira kuti tiite zvaanoda uye kuti tishandire Jehovha. Inoita kuti tive netariro yokusunungurwa “muuranda hwokuora” uye tova “norusununguko runobwinya rwevana vaMwari.” (VaR. 8:21) Chinonyanya kukosha ndechokuti inotibatsira kuziva zvatingaita kuti tiratidze kuti tinoda chaizvo Tenzi wedu wokudenga, Jehovha.—Eks. 21:5.